सौन्दर्य र स्वास्थ्य महिलाको स्वास्थ्य
Esophagitis esophagus को पर्खालहरु को एक सूजन हो। यस रोगको विभिन्न रूपहरू विभिन्न लक्षणहरूद्वारा विशेषता हुन्छन्। सम्पूर्ण र यसको सबैभन्दा सामान्य रूपको रूपमा रोगको उपचारको मुख्य अभिव्यक्तिहरू र तरिकाहरू - अपरिवर्तित एसिफैगाइटिस - विशेष गरी, लेखमा वर्णन गरिनेछ।
Esophagitis को erosive रूप मा, esophagus mucosa धेरै दृढता देखि प्रभावित छ। केवल राख्नुहोस्, यो रोगले यति धेरै विकास गर्दछ कि खराबीको सतहमा देखा पर्दछ, जुन, अनावश्यक कुरा भन्न सकिँदैन, पूर्वनिर्मित गर्न सकिँदैन।
रोगको उपस्थितिको कारण धेरै धेरै हुन सक्छ:
प्रायः प्रायः अपरिवर्तित एसिफैगाइटिस एसिफैगस, अल्सर , हेनिनास को तीव्र सूजन को पृष्ठभूमि को कारण विकसित गर्दछ।
कहिलेकाहीँ यो रोग वायरल वा जीवाणु संक्रमण संग समानांतरमा देखिन्छ।
केहि रोगीहरूले संवेदना पछि esophagus को सूजन कमाई।
त्यहाँका घटनाहरू छन् जब ठूलो मात्रामा विरोधी भ्रामक औषधिहरू प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूमा विकसित एसिओसिभ रिफक्स-एस्फोफाइटिस।
बहिष्करण गर्न र रासायनिक जलाउन असम्भव छ। Alkalis को आकस्मिक इन्जेक्शन को मामला मा, एसिड या प्रौद्योगिकी उद्देश्य को तरल पदार्थ, esophagus व्यावहारिक रूप देखि गारंटी छ।
रोगबाट प्रभावित र अल्कोहल र धेरै मसालेदार खाना प्रयोग गर्नेहरू।
Erosive esophagitis मा विकास को धेरै आधारभूत चरणहरु छन्:
पहिलो, एकल अल्सर म्यूकोसामा देखा पर्दछ। प्रायजसो, क्यान्सरहरू अंगको निचो भागमा बनाइन्छ।
दोस्रो चरणमा, अल्सर बढ्छ, र यस समयमा प्रभावित क्षेत्र एस्फैगसको क्षेत्रको एक तिहाई सम्म पुग्न सक्छ।
तेस्रो चरण अल्सरको पुरानो रूपमा संक्रमण हुन्छ।
निस्सन्देह, चाँडै यो रोग पत्ता लगाइएको छ, सजिलो हुनेछ यो यसको लागी सजिलो हुनेछ। Esophagitis को पहिचान को मुख्य लक्षणहरु लाई मदद मिलेगी।
Erosive esophagitis को लक्षण
मुख्य समस्या यो हो कि केहि मामलाहरुमा esophagitis अस्वाटमेटिक छ, र यसैले केवल एक व्यापक परीक्षा पछि मात्र रोग पत्ता लगाउन सम्भव छ। तर अक्सर रोगले प्रारम्भिक अवस्थाहरूमा महसुस गर्छ।
फैलावट, अप्ठ्यारो, पुरानो, तीव्र र एसिफैगाइटिसको अन्य रूपहरु को लागी लक्षणहरू एकअर्काबाट अलग छैन। केवल एक चीज - म्यूकोसा को घाव संग, उनि सबै अधिक स्पष्ट हो जान्छन्। यस रोगको मुख्य संकेतहरू यो जस्तो देखिन्छ:
प्रायः र गम्भीर हृदयपूर्वी परीक्षाको प्रतिबिंबित गर्ने अवसर हो। विशेष गरी यदि तीव्र वा चिसो खाद्य पदार्थको प्रयोग पछि अप्रिय संवेदन तीव्र हुन्छ।
विषाक्त एसिफैगाइटिसको साथमा रोगीहरूले प्रायजसो विषाणुको शिकायत गर्दछन् जुन खाने पछि हुन्छ। यदि ऊपरी पेटमा छाती क्षेत्रमा दुखाइ छ भने छातीको एसिफिगाइटिसको उपचार आवश्यक हुन सक्छ।
यो रोगलाई रक्तचाप, बेसिंग विकार र उल्टो रक्त अशुद्धता संग उल्टो पनि चिन्ह लगाउन सकिन्छ।
क्यान्सर रिफक्स एसोसिएफिसिसको उपचार
सौभाग्य देखि, एसिफैगाइटिसको उपचार गर्नु गाह्रो छैन। मुख्य कुरा विशेषज्ञहरु को सबै नुस्खा को पूर्ति हो। प्राय: डाक्टरले उपचारको रूढिवादी छनौट रोज्छन्। Esophagitis अक्सर, सबै भन्दा पहिला dysbiosis को उद्भव साबित गर्दछ माइक्रोफ्लोरा पुनर्स्थापना गर्न। विशेष तयारी र डेयरी उत्पादनहरूले यो मद्दत गर्नेछ। प्रतिरक्षा कायम राख्न र भिटामिन परिसर पिउन धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
Erosive esophagitis को उपचार मा, एक आहार को पालन गर्न को लागि यो महत्वपूर्ण छ। समयको लागि, यदि सम्भव छ भने तपाईलाई धूम्रपान र रक्सी दिन आवश्यक छ - यो केवल चम्किलो हुन्छ। तपाईं मसालेदार खाना खाउन सक्नुहुन्न। राम्रो छ सफा खाना खाने
एक राम्रो पकाएको चिकन वा माछा;
यस्तो आहारले एसिफैगाइटिसको उपचार नगर्ने, तर शरीरलाई पनि सानो पार्छ।
Enterobiasis - लक्षणहरू
Gastroesophageal रिफक्स एक आदर्श वा बीमारी हो?
क्यान्सर को Tenosynovitis
आन्तरिक प्रयोगको लागि ग्लिसरिन
रगत ट्राफिक नियम
बिहान सुत्न आँखा
तिल खराबी छ
कम्प्रेसर ईन्डरर - कसरी छनौट गर्ने, खाँसी र दौडको नाक प्रयोग गर्ने, र कुन समाधानहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ?
कलकिल कार्डियो coenzyme Q10 संग
आर्ट डेको शैली आन्तरिक मा
फैशन 2016 मा महिलाहरु के जूता के हो?
8 महिनामा बच्चा कस्तो प्रकारको फल हुन सक्छ?
कुत्तों मा प्रोस्टेटाइटिस
नयाँ नवजात कसरी शांत गर्ने?
फैशनेबल टोपी 2018 - के के गर्न र कसरी स्टाइलिश तस्वीरहरु सिर्जना गर्न को लागी?
गरम डचाको लागि वाशबेसिन
सहज पोषण - यसको अर्थ के हो, सिद्धान्त र नियम
राउण्ड अनुहारको लागि क्याप्सन
बच्चाहरु मा डस्ट्रोफी
जेनिफर एनिस्टन जस्टिन थोरुको तलाक गर्न थाल्नुको कारणले गर्दा ओलिभिया म्यानसँग उनको धोखाधडी
गर्भावस्थामा बवासीरहरूको उपचार
बेडरूमको लागि तालिका लैंप
सेन्ट निकोलस को एबे
आँखाको छेउमा कचौराबाट छुटकारा पाउनु
10 भयानक ठाउँहरू जुन हेर्न सकिन्छ